कुटुमा कुटुका राजनराज : पहिले किन गुमनाम, अहिले किन हिट ?
Saturday, 12 Aug, 2017 2:49 PM
एकपछि अर्को, लगातार सुपरहिट संगीतको सिर्जना गर्नु कुनै पनि सर्जकका लागि असंभवप्राय काम हो । तर अहिलेका सफल एवं चर्चित संगीतकार राजनराज शिवाकोटी भने अपवाद भएका छन् । उनका हरेक फिल्मी गीतले नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछन् । कुनै समय थियो रेडियो र टेलिभिजनमा बजेका आधारमा कुन गीत कति लोकप्रिय भए भन्ने मापन गरिन्थ्यो । सबैका दाबी आ–आफ्नै हुन्थे । तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । युट्युबको जमाना आयो दाबी गर्दैमा मात्र हुँदैन । कुन गीत कतिपटक हेरियो, सुनियो, उसैले सबै कुरा बताईदिन्छ । यदि युट्युबलाई आधार मान्ने हो भने शिवाकोटी नै अहिलेका १ नम्बर संगीतकार हुन । उनले संगीत गरेका चलचित्र ‘वडा नम्बर ६’ को ‘पूर्व पश्चिम रेल...’ ‘छक्कापञ्जा’को ‘सुर्के थैली खोई.....’ र ‘दुई रुपैंया’को कुटुमा कुटुले...’ युट्युबमा एक करोड भ्यूज पार गरेका छन् । ६ वटा नेपाली गीत मात्र छन् युट्युवमा करोड भ्यूज पार गर्ने जसमध्ये ३ वटा शिवाकोटीको नाममा छन् । संगीतमा सफलतासँगै बजारमा उनको चर्चा, माग र ब्यस्तता बढेको छ । अहिलेका उनै चर्चित संगीतकार शिवकोटीले आफ्नो सांगीतिक सफलताको रहस्य हामीसँग यसरी खोले :
राजनराज शिवाकोटी, गायक/गीतकार/संगीतकार
मेरो संगीतमा स्रोता नोष्टाल्जिक बन्छ
मैले संगीत गर्ने स्रोतहरुका लागि हो । मेरा रचना स्रोता–दर्शकको डिमाण्ड, टेष्ट अनुसार भयो । उहाँहरुले खोजे कै जस्तो संगीत तयार गरेकाले मेरो गीतहरुलाई रुचाउनुभयो । नेपाली माटोको सुगन्ध, आफू जन्मेको हुर्केको, बढेको धरातलको कुराहरु सबैलाई मन पर्छ स्वभाविक रुपमा । आफ्नै कथा–व्यथा, कला, संस्कृती धर्मसँग सम्बन्धित कुराहरु जुन दर्शक स्रोताहरुसँग सिधै रिलेट गर्छ त्यसले सवैको ध्यान खिच्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसमा पुरानो चिजहरु जान्ने उत्सुकता हुन्छ । पुरानो पुस्ता आफ्नो स्मृतिमा जान खोज्छ । मानौ कि ‘आँगनीमा कलधारो कलधारोमा लेउ’ भन्दाखेरी, अब गाउँघरमा आँगनको छेउमा कलधारो हुन्छ नी, त्यो मान्छेले झल्यास्स सम्झन्छ । ओहो ! मेरो कथा त, यो पनि थियो है भन्ने हुन्छ । जस्तै ‘सुर्के थैली’, अथवा ‘कुटुमा कुटु’ भन्ने गीतमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरु आफुले भोग्दै आएको र आफ्नो चलनचल्तिमा भएका चिजलाई बिर्सिराखेको बेलामा एक्कासी पाउँदा रमाइलो हुन्छ की जस्तो लाग्छ मलाई ।
फिल्मका कथावस्तुको परिवेश पनि मिल्यो
यो अर्थमा म आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु । खास कुरा त त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई । मैले संगीत गरेका सबै चलचित्रहरुमा मेरो गीतको कन्सेप्ट लगभग–लगभग मिल्न खोज्छ । त्यो हिसाबले प्रायजसो अहिलेसम्म आएका सबै चलचित्रको स्टोरीमा मेरो संगीत एडजष्ट भएको देखिन्छ । म भाग्यमानी भएर पनि होला ।
म हिँडेको बाटो सहि रहेछ भन्ने लाग्छ
भेटघाट हुँदाखेरी अग्रज स्रष्टाहरुले स्याबासी दिइराख्नु भएको छ । राम्रो गर्यो भनेर, ‘अगाडि बढ यसैगरी हाम्रो माया आर्शिवाद छ’ भन्नुहुन्छ । दर्शक स्रोताहरुको माया हुने नै भइहाल्यो । यहि क्षेत्रमा लागेका साथीभाइले पनि अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरिराख्नु भएको छ । त्यतिबेला म हिँडेको बाटो सहि रहेछ भन्ने फिल हुन्छ । १० बर्ष अघि नै चलचित्रमा यस्तै खालको संगीत गर्न चाहन्थे तर त्यतिखेर आत्मविश्वास पनि कमजोर थियो । जुन बेलामा मैलै ०६२–०६३ सालमा वार्ता गराईदिउँ भन्ने एल्बम निकालेको थिएँ, लोक–शैलीको लोक–मोर्डन, त्यो चल्दाखेरी मलाई एक किसिमले यो ट्रेण्ड चल्न सक्छ र यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । तर बीचमा मैले मौका पाइन । मैले वर्कआउट गरें, एक दिन पक्कै पनि मौका आउला भनेर । अहिले मेरो सोच अनुसारको काम गर्न पाएको छु ।
‘एकै खालको लय’ मेरो शैली हो
आमाको काख त एउटै नै हुन्छ नि होइन र ? आमाको काखमा लुटुपुटु गरेको माया र स्नेहको आभास त एउटै हुन्छ । आमाको माया फरक खोज्छु भनेर अर्काको काखमा मान्छे जाँदैन । मेरो शैली नी त्यही हो । लोकशैली नेपाली माटोको सुगन्ध हो । कतिपए हराएका र लोप हुनलागेका शब्दावली मैले प्रयोग गर्छु । त्यसले पुरानो पुस्ता आफ्नो स्मृतिमा गए नयाँ पुस्ताले अभ्यस्त हुन पाए । त्यसले शब्दको पनि जगेर्ना गरेको छ । नयाँ पुस्ताले हाम्रो संस्कृति के रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान पाएको छ । अर्को कुरा हरेक गीतमा कन्सेप्ट फरक छ मेलोडी फरक छ । बाजागाजा तिनै हुन । हाम्रै नेपाली बाजासँग फ्युजन गरेर बजाउने हो । सबै गीतको शैली एउटै होइन । नेपालीपन बोकेको भएपछि लगभग–लगभग कलर त आइहाल्छ ।
फरक खालको संगीतमा पनि मेरो दक्षता छ
धेरै दर्शक स्रोताहरुलाई थाहा छैन होला, यो भन्दा अगाडि मैले पपगीत, आधुनिक गीतहरु गरेको छु । अनिल सिंहले गाएको ‘म माया गर्छु मेरी उनीलाई’, नविन के. भट्टराइले गाएको ‘अलिकति पिडा हुँदा नि’, अन्जु पन्तले गाएको ‘जिन्दगी यो फुलै फुलको थुंगा हुँदैन’, भन्ने गीत सुन्नु होला । मैले नगरेको होइन पहिला गरेको छु । तर यो समय, यतिखेर दर्शक स्रोताको लागि यस्तै शैली मन परेको छ । त्यसले गर्दा मैले यो गरेको हो । समयअनुसार चल्दै जाने त हो नि ।
चलेका गीत नै सदाबहार बन्ने हो
‘मोहनी लाग्ला है’ आजसम्म उत्तिकै ताजै छ । ‘कुसुमेरुमाल’, ‘चट्ट रुमाल’, ‘बाह्रहाते पटुकी’ आजसम्म ताजा छ । चलचित्रभन्दा बाहिरको वारी ‘जमुना पारी जमुना’ आजसम्म चर्चित छ । अहिले तत्कालै समयको हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै तीन बर्ष भयो ‘सुर्केथैली’ आजसम्म ताजै मानेका छन् । त्यो भन्दा पछाडिको कुरामा म भविष्यवाणी गर्न सक्दिन ।
गीतले चलचित्र चले
यो त स्वभाविक रुपमा स्पस्टै देखिएको छ । ‘कुटुमा कुट’ु भन्ने गीत दर्शकले जुन रुपमा मनपराउनु भयो ‘दुई रुपैया’ भन्ने चलचित्र हेर्न जानुपर्छ भन्ने मानसिकता सबैमा बन्यो । त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा हलसम्म दर्शकलाई तान्ने काम गर्यो नि । पब्लिसिटीको माध्यम त गीत बन्यो । पछिल्लो समय चलचित्रहरुले पनि राम्रै व्यापार गरिरहेका छन् । त्यसमा गीतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । अहिले निर्माता निर्देशकले चलचित्रमा गीत संगीतलाई प्राथमिकता दिन थाल्नु भएको छ ।
प्रस्ताव लिएर आउनेलाई निराश पार्दिन
सम्भावना रहेसम्म मेरो सिर्जनाले चित्त बुझाएसम्म मैले रिजेक्ट गरेको छैन । किनभने म सिर्जना गर्ने मान्छे हो । मैले त जो आए पनि जस्तो आए पनि मसँग भएको चिजलाई दिन पर्छ । ब्यानर जस्तो सुकै होस, ठूलो सानो, नयाँ पुरानो जस्तो होस मसँग भएको म्यूजिक निःसन्देह निसंकोच दिल खोलेर सुनाउँछु । कतिपयलाई मनपर्छ कतिपयलाई पर्दैन । उहाँहरुको स्टोरीमा सुट नहुन सक्छ । कतिले स्टोरीमा सुट गरेन भन्नृु हुन्छ । ति चिज आफसे आफ हुने कुराहरु हुन ।
तनाव लिएर काम गर्दिन
म पहिला पनि त्यति चापमा काम गर्दिनथे । मसँग सिर्जना छैन भने अलि समय यत्तिकै पनि चुप लागेर बस्छु । सिर्जनाको लागि टाइम कुर्छु । चाप लिएर तनाव लिएर हिँडदिन । मलाई चाप भन्दा पनि खुलेर सिर्जना गर्न रमाइलो लाग्छ । मसँग भएको सिर्जनाले कोही रमाउनु भयो भने खुसी लाग्छ ।
म होइन मेरा सिर्जना हिट भएको हो
मैले सुरुमा संगीत गर्दा म सुपरहिट, सुपरस्टार हुँला भनेर गरिन । आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले राम्रो सिर्जना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । मेरो आत्माबाट आएको कुरालाई प्रस्तुत गर्छु भन्ने थियो । सुरुसुरुमा उतारचढाव, तनावका कुरा आउँथ्यो । तर समयले परीक्षा लिन्छ । यो कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा थियो । किनभने समयले त्यो लिन्छ नै । ती दिनहरुमा पनि मैले रमाउँदै काम गरेँ, धेरै सिकेँ । त्यसलाई दुःखको रुपमा लिइन । त्यसले गर्दा समयसँग मार्केटसँग आफूले चाहेको कुरासँग टुयुन हुन सजिलो भयो । यहि स्थानमा पुग्छु भन्ने त थिएन तर आज पनि म कुन स्थानमा पुगे भन्ने थाहा छैन । म हिट भएको हैन मेरो सिर्जना हिट भएको हो । म त एउटा माध्यम मात्रै हो । म आफ्नो काम गरिराखेको छु । मैले जानेको बुझेको सकेको काम निरन्तर गरिराखेको छु । त्यो सिर्जनामा दर्शक–स्रोताहरु रमाइराख्नु भएको छ । त्यो मेरो मात्र होइन सारा नेपालीहरुको प्रिय चिज बनेको छ । त्यो प्रसाद हो सवैलाई बाँडिदिएको छु ।